Minisiteran'ny aterineto - Iraka Iraisam-pirenena ho an'ny fanampiana voina
Ny Ministera Fanampiana Ho an'ny Fahazoan-dalana dia manome sakafo maimaim-poana, fitaovana kely / fitaovana fikarakarana trondro sy mpilatsaka an-tsitrapo hanampy amin'ny fanadiovana amin'ireo tra-boina amin'ny karazana loza voajanahary - tondra-drano, rivo-doza, tornadoes, afo, horohoron-tany, sns. Manana Talen'ny Outreach izay miasa miaraka amin'ity ny iraka hananganana fandaharam-pianarana amin'ny Baiboly any amin'ireo faritra izay anampiantsika. Amin'ny alalan'ny fanampian'ny fiangonana eo an-toerana ao amin'ireo faritra voakasika, dia afaka manompo betsaka tahaka ny olona 4,000 isanandro miaraka amin'ny lakozia finday izahay.
Miezaka ny hizara ny fitiavana sy fahatakarana momba an'i Jesoa miaraka amin'izy ireo isika. Tiany ho fantatr'izy ireo fa mikarakara antsika Andriamanitra ary manao koa isika. Noho ny ezak'ireo mpirotsaka an-tsitrapo tao amin'ity asa fitoriana an-trano ity, dia fampianarana Baiboly an-jatony no notanterahina ary mahafantatra olona maro izay vita batisa ho an'i Kristy isika. Ny tena manan-danja dia ny hanampy ny fiangonana eo an-toerana.
Mike Baumgartner, Filoha / CEO